Vatashanyi veCzech vanogara mumahotera anodhura muCroatia
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Vatashanyi veCzech vanogara mumahotera anodhura muCroatia
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Croatia Kuputsa Nhau • tsika nemagariro • Czechia Breaking News • nhau • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Vatashanyi veCzech muCroatia vanoonekwa sevakachipa uye nhimbe yekusarura yakatanga kuvashanyi vaishanya kuCroatia kubva kuCzech Republic, nyika dzese dzeEU.
Vanoda kusvika miriyoni imwe yevashanyi vakadaro vanoonekwa sevakachipa vari kushanyira Adriatic gore rega rega maererano naJan Papež, mutauriri weCzech Association of Travel Agents muBlesk. “Hazvina kunaka kutipa chidhindo che 'pašteta vashanyi'. Vaenzi veCzech vakakosha zvakanyanya kuCroats. Vanhu vangangosvika miriyoni vanouya kuAdriatic gore rega rega, ”akadaro Jan Papež, mutauriri weCzech Association of Travel Agents muBlesk.
Zvakare, sekureva kwaPapež, ivo havangoshandisa chete mazhizha avo kugara munzvimbo dzakachipa kwazvo. "Vazhinji vanoenda kumahotera ane nyeredzi ina uye epamusoro-soro," akawedzera. Akasimbisawo kuti mushure mehondo kutanga kwema1990, apo nyika yakanga isingafarire kuCroatia, maCzech akauya pekutanga. ”
Papež anoenderera mberi kureba nhepfenyuro yemuno, maCzech ari kushanyira Croatia nehuwandu kwazvo kunyangwe mitengo iri kukwira. ”
Pamusoro pegore rapfuura, 32,763 veCzech vafambisi vezvikepe vakashanyira Croatia (uye vakaona 218,404n 800 overnights). Uye pamwe hazvidi kusimbiswa kuti havana kudya pate, munyori akanyora. Vazhinji vashanyi veCzech vanorendawo zvikepe pa-saiti, izvo zvinodhura pakati pe50,000 kusvika XNUMX euros pasvondo.
Asi mari yavanoshandisa haigume pano. Anosimudza uye mooring zvikepe zvinofanirwawo kutarisirwa. Semuenzaniso, muSplit, kusungira yacht kubva pamamita gumi kusvika pamakumi maviri kunodhura kwakatenderedza 10 kusvika 20 kuna nehusiku. Kuna Kuna ingangoita 700 Euro kana 1600 US Dhora.
Kupaka mota mumarina kunodhura 40 kusvika 60 euros pasvondo, kuwedzera kune yakachena mvura, mafuta kana magetsi, wifi kwehusiku hwekugara mumarina. "Maererano nekufungidzira kwakashata, vafambisi vechikepe veCzech vanoshandisa mari inosvika mamirioni zana neshanu munyika iyo inotidaidza 'vashanyi vepašteta'," Blesk akawedzera
Zvinoenderana neongororo yakaitwa neUniversity yeRijeka gore rapfuura, maCzech anoshandisa avhareji yemakumi matatu nemakumi matatu kuna zuva muCroatia, iyo isiri yakawanda kana ichienzaniswa neBritish iyo inoshandisa avhareji ye390 kuna. Nekudaro, iro rakakura boka revashanyi vashanyi vekumba. Vanongoshandisa chete 368 kuna zuva.
5,489,607 overnights dzeCzech muCroatia nevhareji yemari, zvakaenzana 2.2 bhiriyoni kuna kune yeCoron yekufambisa neyekushanya indasitiri yakawanikwa gore rapfuura chete kubva kune aya anodhura eCzech vashanyi. Mumwe anogona kudaidza iyi isina kukodzera profiling.